Habka ugu fiican ee loo codsado kordhin, tilmaamaha | Ragga Stylish
Sidee loo codsan karaa mushaar kordhin?
Dadaalo badan iyo u hureyn kadib, waa wax dabiici ah in la hamiyo abaalmarin loo tarjumay hagaajinta mushaharka. Mararka qaarkood, kordhinta mushaharku waxay ku timaaddaa sidii ay shirkaddu lafteedu u aqoonsan tahay, iyadoo ka warqabta hantida aadanaha ee ay ku leeyihiin darajooyinkooda.
Si kastaba ha noqotee, xaaladaha badankood tani maahan kiiska. Waana marka ay taabato soo qaado geesinimo oo weydii koror aad u qalmay.
Mabda 'ahaan, waa ficil ay tahay in la qaado leh madax qabow. Waa inaad dejiso istiraatiijiyad oo aad u fulisaa talaabo talaabo.
Tilmaamaha qaarkood ee weydiinta kordhinta
Qof kasta oo shirkadda ka mid ah waa kharash. Taasi waa wax ay tahay in si cad loo caddeeyo. Hadda, shirkaddu waa inay ogaataa in heerka ballanqaadka, u-go'an iyo xirfad-yaqaan ee uu bixiyo qofka shaqaalaha ah ee codsanaya kordhinta mushaharka ay adag tahay in laga helo qof kale.
Si cad u cadee guulaha iyo wax ku darsiga shirkadda. Jadwalku wuxuu sababi karaa waxyaabo badan oo "caadi ka dhiga" oo aan laga fiirsan qiyaas ahaan. Haddii ay jiraan guulo muuqda, haddii himilooyinka oo dhan la gaadhay, haddii tabarucaad laga sameeyay wixii aan caadiga ahayn, waxaa habboon in liis la sameeyo oo loo muujiyo dood ahaan. Waxyaabaha wanaagsan waa in la ogaadaa.
Waa inaad barataa suuqa. Shaqaale kastaa waa inuu isku tixgeliyaa inuu yahay adeeg bixiye una arko kan uu u shaqeeyo inuu yahay macmiil isaga ka bixinaya. Haddii mushaharka iyo mushaharku ka hooseeyaan waxa suuqa dejinayo, waxaa jira meel laga codsado horumar.
"Waxaan hayaa dalabyo ..." Tani waa mid ka mid ah "farsamooyinka" ugu isticmaalka badan. Haddii aad aadi doontid, waa sababta oo ah dalabku waa dhab, maadaama mid ka mid ah laba arrimood ay dhici doonaan: kordhinta mushaharka ama cayrinta.
Laakiin wax walba ka sarreeya, waa inaad siisaa aragti ah qof bisil oo caqli badan. Codsiga kordhinta waa in aan loo arkin khiyaano uun. Waa qirasho, sidoo kale dhiirigelin, laakiin waligaa ha u muujin sida madow.
Ilaha sawirka: Ignacio Santiago / Dhalinyarada Wadanka Dhalinyarada
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » dhaqanka » Sidee loo codsan karaa mushaar kordhin?
Lemaire guga / xagaaga 2018: sartorial minimalism
Xeebaha ay tahay inaad booqato xagaagan